ဖြစ်ရပ်များမော်ကွန်းတိုက် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နိုင်ငံတကာစစ်ရေး Radar နှင့်နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေးထိပ်သီးကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာသစ်ကိုအစည်းအဝေးအမှတ်ပြပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ က S-400 နှင့် 35-Fi ကိုကိစ္စများထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆှေးနှေးမညျ, ကဏ္ဍရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ပို့ကုန်အလားအလာတိုးမြှင့်ယူ [ပို ... ]
3 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးတီး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဧပြီလ 2-4 2020 အပေါ်ကနျြးမာရေးညီလာခံ Izmir အတွက်လုပ်ဖို့
ကျနော်တို့ရပ်ကွက်, ခရိုင်, ပြည်နယ်, တိုင်းဒေသကြီးများ, တိုက်ကြီး, ကျွန်းများအပေါင်းတို့နှင့်တကွနေရာအရပ်ယူသောထူးခြားတဲ့အလှတရားနယ်ပယ်မှာနေထိုင်; ဧပြီလ 2020 ခုနှစ်တွင်တူရကီ၌အကြှနျုပျတို့၏ကမ်ဘာတွေ့ကြံဘို့အတူတူစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ Izmir အတွက်ဧပြီလ32 4-date ဖြစ်အောင်များအတွက် xnumx.uluslarara စီးတီး, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျန်းမာရေးကွန်ဂရက် [ပို ... ]
ıstanbullight, 12 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Lighting & လျှပ်စစ် 18-21 စက်တင်ဘာလ 2019 နေ့စွဲအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာကျင်းပစေမည်အကြောင်း, ပြပွဲနှင့်ကွန်ဂရက်ထောက်ပံ့။ တူရကီအလင်းရောင်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းကျင်းပအလင်းရောင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများအသင်း (AGID) နှင့်တူရကီအလင်းပေးခြင်းအပေါ်အမျိုးသားကော်မတီ (ATMK) တရားမျှတတဲ့ [ပို ... ]
နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး '' ဗြဲနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကုန်သည်များနှင့်ကုန်စည်ဒိုင်အသင်းတူရကီပြည်ထောင်စုပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏ဇွန်လ 18 2019 အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်ဌာန, တွင် "သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ရပ်ခေါင်းစဉ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညီလာခံကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါကွန်ဖရ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ; သိပ္ပံနည်းကျကမ်ဘာပျေါတှငျလူအများကလေးစားသုတေသီများ [ပို ... ]
ယခုနှစ် 2019 အတွက်ပို့ကုန်အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲ Anadolu Isuzu ကား, 9-12 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေး 2019 ပူးပေါင်းဇွန်လတွင်စတော့ဟုမ်းအတွက်ဆွီဒင်အတွက်ကျင်းပခဲ့တယ်။ Isuzu ကားနှင့် Isuzu ကား Novocit Visigo အသစ်ဆွီဒင်အတွက်ခန့်အပ်ထားသော Anadolu Isuzu ကားဘဝကပြပွဲ၏ပြပွဲရပ်တည်ချက်, [ပို ... ]
III ကိုမြေအောက်ရထားလမ်းစနစ်ကအာရုံစိုက်။ Metrorail နိုင်ငံတကာဖိုရမ်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအတူတကွတတ်၏။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် TCDD ပင်မပံ့ပိုးမှု၏အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turhan auspices, KGM AYGM အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်တူရကီ [ပို ... ]
ပြပွဲ Istanbullight ပထမဦးစွာအချိန်အထူးကမ်းလှမ်းချက်များတွင်ပါမှကုမ္ပဏီများ!
အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲıstanbullight, အဆင်းလှသောတဲရပ်တည်ချက်ပြသခဲ့သည်များအတွက်အထူးအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤနှစ်တွင်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အလင်းရောင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများအသင်း (AGID) နှင့်အလင်းပေးခြင်းအပေါ်တူရကီအမျိုးသားကော်မတီ (ATMK) မဟာဗျူဟာမြောက် [ပို ... ]
အလင်းရောင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများအသင်း (AGID) နှင့်အလင်းပေးခြင်းအပေါ်တူရကီအမျိုးသားကော်မတီ (ATMK) 12 နှင့်အတူ၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Lighting & လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာပြပွဲနှင့်ကွန်ဂရက်, အစ္စတန်ဘူလ်တရားမျှတသော Center မှာ 18-21 စက်တင်ဘာလ 20199ıstanbullight။ နှင့် 10 ။ [ပို ... ]
အဆိုပါအစိမ်းရောင်အလင်းများရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ
မေးခွန်းမှ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးမစ္စတာလီ Ihsan သင့်လျော်သော Eurasia ရထားလမ်းရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာတရားမျှတသောတာဝန်ကျတဲ့အဖြေကိုဝမ်းသာပီတိပါလိမ့်မည်သည့်ရထားစနစ်များအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Eurasia ရထားလမ်း Hon တရားမျှတသော ဒေါက်တာ Mustafa Ilıcalıကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးရထားလမ်း "ကတည်းဖြတ် [ပို ... ]
ဥရောပအာရှရထား 2019 တရားမျှတသောမှာ Nexans, ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ပြင်းထန်သောအတိုးကိုမြင်လျှင်
ထိုဒေသတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3။ ဒါဟာဒီနှစ်ကျင်းပအကြီးဆုံးရထားလမ်းပြပွဲနှင့်သင်တန်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် "ဥရောပအာရှရထား 2019" ၏အဋ္ဌမဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးသယ်ဆောင်။ cable ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကစားသမားတဦးတည်း, Nexans ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ပြင်းထန်သောအတိုးကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ ဆောင်ပုဒ်ဖောက်သည် "ဒါဟာဘဝစွမ်းအင်ကြာ" [ပို ... ]
အနာဂတ်မှာစမတ်မြို့ရွာတို့အဘို့ Siemens ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကြောင့်နယ်ပယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ရက်7ပေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအစ္စတန်ဘူလ်စမတ် Grid နှင့်မြို့ကြီးများကွန်ဂရက်နှင့်တရားမျှတသောမိတ်ဆက်။ အစ္စတန်ဘူလ်, Smart ဇယားကွက်၏အနာဂတျမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကဏ္ဍအတူတကွဆောင်ခဲ့နှင့်မြို့ကိုဦးတည်ချက်ပေးခြင်း [ပို ... ]
Ter တံခါးစနစ်များ Eurasia ရထားတရားမျှတသော၌ကြီးသောအတိုးဆွဲဆောင်ခဲ့သည်
Ter တံခါးစနစ်များတံခါးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ တရားမျှတသောပြပွဲများတွင် 2019 Eurasia ရထားစနစ်များလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများအတွက်ထုတ်လုပ်တတိယမျိုးဆက်လမ်းရထား, LRV, မက်ထရိုနှင့်တံခါးကိုစနစ်များ, သင်တန်းသားများအားဖြင့်ကြီးမြတ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ "ဟုအဆိုပါ 1993 ဂျာမဏီ (Velbert) ခုနှစ်တွင် [ပို ... ]
ယင်း၏ဧည့်သည်များမှဆန်းသစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်အတွက် ABB Solarex 2019
ဧပြီလ ABB 05 07-2018 11 Solarex သမိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင် & Technologies ကတရားမျှတသော, ကြီးမားအစွမ်းထက်အင်ဗာတာဘူတာနှင့်အတူစက်မှုဇုန်နှင့်ပြည်တွင်းတပ်ဆင်သင့်လျော်သောစမတ်အင်ဗာတာဖြေရှင်းချက်ပြသခဲ့သည်။ ABB, အ B10-C01 အမှတ် xnumx.hol အတွက်မတ်တပ်ရပ်, [ပို ... ]
တရားမျှတသောစီစဉ်သည် "8 အတွင်းတူရကီအတွက်ဖွဲ့စည်း ITE ကုန်သွယ်ရေးဦးဆောင်တူရကီရဲ့ဦးဆောင်ကဏ္ဍ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထားနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ - ဧပြီလ Eurasia ရထား "ဒီနှစ် 10-12 fuarizm Izmir အတွက်ပြပွဲ Center မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ သံလမ်း [ပို ... ]
TCDD ရပ်, Eurasia ရထားတရားမျှတသောကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဖွစျလာ
တူရကီရဲ့သာနဲ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားနှင့်အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်နှင့်ဥရောပအာရှရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ TCDD ဧည့်သည်များနှင့်အတူ 2019 Raysimaşနှင့် DATEM အဖွင့်ရပ်တည်ချက်အကြီးအစိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ ပထမဦးဆုံးအဘို့ဤနှစ်တွင် [ပို ... ]
Dursun နှင့်သင့်လျော်သော, Eurasia ရထားတရားမျှတသောမှာတစ်ခွင်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Selim Dursun လီ Ihsan သင့်လျော်သော, မျှတသောအတွက် 10-12 2019 ဧပြီလနေ့စွဲတူရကီရဲ့သာနဲ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 3, Izmir အတွက်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ရထားလမ်းနှင့်အလင်းရထားလမ်းစနစ်များ Eurasia ရထား 2019 [ပို ... ]
တူရကီ, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3အတွက်တစ်ခုတည်းသောကဏ္ဍ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထား, အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဥရောပအာရှရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသောယခုနှစ် 8 ။ က Izmir ဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်။ ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ Selim Dursun နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးတန်းမန်နေဂျာ၏ဒုတိယဝန်ကြီး [ပို ... ]
အဆိုပါ Alsancak ဘူတာ Tuluyhan Ugurlu အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲ
မိမိအ 8 အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ Izmir ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာ Selim Dursun, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနအတွက်အထွေထွေမန်နေဂျာ [ပို ... ]
အဆိုပါ 2020 10 အမြင့်မြန်နှုန်းရထားသတ်မှတ်မည်ပို Ray ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ခုနှစ်တွင်
Siemens Mobility ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ Inc ကိုဥက္ကဋ္ဌနှင့်တူရကီနိုင်ငံလည်ပတ်ဆက်လက်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောအားဖြင့်7ပိုငျးပိုငျးမြန်နှုန်းရထားအစုံဖြင့်ထုတ်လုပ်အကြီးတန်းမန်နေဂျာ Rasim CüneytGenç, Siemens "10 set ကိုကျနော်တို့က high-speed ကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိန့်ကိုလေ့ကျင့်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏။ [ပို ... ]
IMM ပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် edited Intertraffic အစ္စတန်ဘူလ်တရားမျှတသောစတင်
"Intertraffic အစ္စတန်ဘူလ်" စတငျပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူဖွဲ့စည်းဥရောပအာရှထိပ်တန်းအသွားအလာနည်းပညာမျှတ၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်။ အဆိုပါ IMM အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာလုပ်ဆောင်ကြောင်းပြပွဲဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်း Hayri Baraçlı "ကျနော်တို့အချိန်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ကအစိုးရနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ချွေတာရေးတစ်ဦးနားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Soyer: "ကွန်ယက်ရထားအကျိုးစီးပွားကီလိုမီတာ 480 ပါလိမ့်မယ်"
တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပြပွဲစက်ရုံ Izmir မျှတသောကမ္ဘာ့3။ ဥရောပအာရှရထား-အကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာမီးရထား, အလင်းရထားစနစ်များနှင့်အတူရထားလမ်းပြပွဲသည်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော hosting ဖြစ်ပါတယ်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunçကုန်သွယ်ရေး၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်စကားပြောသော [ပို ... ]
"လူဦးရေ၏ YHT တူရကီဝန်ဆောင်မှု 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းချပါ": များအတွက်သင့်လျော်သော
ဥရောပနှင့်အာရှ, ကမ္ဘာ့3တဦး။ ဥရောပအာရှနိုင်ငံတကာရထား-ရထား၏အကြီးဆုံးပြပွဲ, အလင်းရထားစနစ်များ, ဧပြီ 10 2019 ပေါ်တွင်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော၏အဋ္ဌမ Izmir တရားမျှတသောစင်တာဖွင့်လှစ်။ ထို့အပြင်တဲနေရာမှာယူထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
Siemens Mobility ကို EurasiaRail 2019 အပေါ်ချိတ်ဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလေးပေး Make မှ
အဆိုပါမပြတ်မတောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂေဟစနစ် "ဒစ်ဂျစ်တယ်တီထွင်မှုကဏ္ဍကိုယ်စားလှယ်များပူဇော်ပါလိမ့်မယ်" တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးအပြင်းအထန်ကွန်ယက်ဖြစ်သည့်ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင် "ကျနော်တို့ချိတ်ဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံဖော် 'ကို Fair တက်ရောက်ရန်မည်သူ Siemens Mobility ကို EurasiaRail 2019 ။ အများကြီးဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Automechanika အစ္စတန်ဘူလ်တရားမျှတသောဘို့စတင်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3။ ဧပြီလ47-2019 သမိုင်းအကြားအကြီးဆုံးမော်တော်ကားကုန်သွယ်မှုတရားမျှတတဲ့ Automechanika အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် TUYAP တရားမျှတသောနှင့်ကွန်ဂရက်စင်တာ၌စတင်ခဲ့သည်။ တူရကီရဲ့ပို့ကုန်ချန်ပီယံအစ္စတန်ဘူလ်၌ဤနှစ်တွင်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ Automechanika တွေ့ဆုံမည် [ပို ... ]
သူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စပီကာဖျော်ဖြေဖို့အရေးကြီး Eurasia ရထားကဏ္ဍ
တူရကီရဲ့သာနဲ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး3။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားနှင့် fuarizm အတွက်အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်နှင့်ဥရောပအာရှရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော Izmir တွင်တည်ရှိသည်အရေးကြီးသောဧည့်သည်များနှင့်စပီကာ 10-12 ဧပြီလပါဝင်သည်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ တူရကီနှင့်အလင်းရထားလမ်း [ပို ... ]